Knowledge | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Restart ခဏခဏ ကျတာမျိုး Shutdown ခဏခဏ ကျတာမျိုးတွေ ကြုံဖူးချင်လည် ကြုံဖူးကျမှာပါ။
မကြုံဖူးရင်လည် ဗဟုသုတပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကတော့
တောက်တဲ့ လက်အုပ်ချီတာ ဘာကြောင့်လဲ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တောက်တဲ့က ထီနံပါတ် ပေးတယ် ဆိုတာကို တချို့က ယုံကြည်ကြတယ် တဲ့။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, May 01, 2012 No comments:
ကုန်းဘောင်ခေတ်တုန်းက လူမျောက်မိသားစုအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကုန်းဘောင်ခေတ် လူမျောက် အကြောင်းကို ဖတ်ဖူးခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ လူထုဒေါ်အမာ ရေးတာရော၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး ရေးတာရော၊ ဦးစိန်မောင်ဦး ရေးတာရော၊ မြကေတု ရေးတာရော၊
မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်) ရေးတာရော မှတ်မိနေပာတယ်။ ဒဂုန်ခင်ခင်လေးက စာဆိုတော်ဝတ္ထုကြီးထဲမှာ၊ လူထုဒေါ်အမာက ဈေးကောက်လူမျောက် ဆောင်းပါး၊ ဦးစိန်မောင်ဦးက
လူမျောက်မိသားစုနှင့်သိပံပညာအမြင်၊ မြကေတုကလူမျောက် မောင်ရွှေမောင်နှင့်သမီးမယ်ဖုံ၊ မောင်သန်းဆွေက ကုန်းဘောင်ခေတ်က လူမျောက်ရှင်းတမ်း စတဲ့နာမည်တွေနဲ့ဖြစ်ပ်တယ်။
'ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား မင်းကွန်း တိပိဋက ဆရာတော် ဘုရားကြီး အကြောင်း
မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Guinness Book of World Records ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ တယ်လီဖုန်း SIM ကဒ်တွေကိုဇီးထုပ်၊ နေကြာစေ့ထုပ်တွေလို ဟောဒီလို
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, April 22, 2012 No comments:
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Tuesday, April 17, 2012 No comments:
ကဏ္ဍ Beautifully, Knowledge, Photos
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, April 17, 2012 No comments:
ထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုကို မမြင်ဖူးသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်မယ်နော်...
ကဏ္ဍ Knowledge, Photos
(Love has its reason ...and that reason is unknown ! )
၁ ။ သူမရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကြောင့် (သို့မဟုတ် ) သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကြောင့် (သို့မဟုတ်) သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကြောင့် ချစ်တာဆိုရင်
မြန်မာပြည်မှာ ဂစ်တာပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်
မြင်ဖူးပြီးတဲ့သူငယ်ချင်းများရှိရင်လဲလည်းကျနော့ရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဝေဖန်အကြံပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ..။
သူငယ်ချင်းများ ဗဟုသုတရဖို့ ကျနော်ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ ဂစ်တာပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဓါတ်ပုံနဲ့တင်ဆက်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..........။
မိမိ gtalk ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ ?
မိမိ gtalk ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ ကျနော် ရေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ လိုလိုမယ်မယ်သိထားသင့်တာပေါ့။
ဆိုင်တွေမှာ သုံးသူများ အတွက် (သို့မဟုတ်) သူများ ကွန်ပြူတာနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်။
တော်တော်များများက Gmail password hack မယ်ဆိုတာနဲ့ အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဗျ။ ဘာလို့သူများ password ကို သိချင်ကြမှန်း မသိဘူး။
ဘာမှ ကောင်းကျိုး မရှိဘူး။ ရေးတဲ့လူတွေ ရှိတော့လည်းပြောပြရတော့မှာပေါ့ဗျာ။
ကဏ္ဍ Google, Knowledge
ဒီနေ့ နေနေ စာရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ နေနေရဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်လိုချစ်ရတဲ့ ဆရာပြောသောစကားလေးတစ်ခွန်းကို သူငယ်ချင်းများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
* ဒီခေါင်းစဉ်လေး ကစာလုံးလေးလုံးတည်းပေမယ့် အဓိပါယ် တော်တော် သက်ရောက်ပါတယ်။ နေနေက စာတိုပေစလေးတွေကို မှတ်တတ်တယ်လေ။ အဲဒီထဲကဒီစာတိုလေးရွေးရတာက နေနေကသူငယ်ချင်းတွေကို သိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပါ။
မသိသေးတဲ့ လူတွေအတွက်ပါ သိပြီးသားလူတွေဆိုရင် ဆောရီးပါ။ နေနေရဲ့ ဆရာကပြောတယ် လူတစ်ယောက်မှာတဲ့ ဒီအချက်လေးချက်ထဲက လေးချက်လုံးမညီတောင်မှ နှစ်ချက်လောက်ပဲ ညီအောင်နေအုံးတဲ့ လူဘဝမှာ ကောင်းကောင်းရပ်တည် ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ထိန်းနိုင်ပြီး ဘဝမှာလဲ အဓိပါယ်ရှိရှိ နေနိုင်သွား နိုင်မယ်လို့နေနေရဲ့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်လိုချစ်ရတဲ့ ဆရာက ပြောပြဘူးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်နေနေ ဆရာ အစ်ကိုကြီးကိုလေးစားသော အားဖြင့် ဒီစာလေးကို သူငယ်ချင်းများအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်.......
1. D-Self Discipline.
2. r-Self Respect.
3. C-Self Control.
4. C-Self Confidence.
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, March 28, 2012 No comments:
လူသိနည်းသော ကွန်ပျူတာနှင့် ပက်သက်သည့် အကြောင်းအရာ အချို့
ယင်းတိုက်ဟာ ၁၁ ထပ်ရှိပြီး တစ်ထပ်စီ တစ်ထပ်စီဟာ ၃၆၀ ဒီဂရီ လည်ပတ်
Nemo 33 ဆိုတာဟာ Brussels, Belgium နိုင်ငံမှာ တည်ရှိပါတယ် ။ ကမ္ဘာ့အနက်ဆုံး ရေကူးကန်အဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်... ။ အိမ်ပုံစံ ရေကူးကန်ဖြစ်ပါတယ် ။ အထပ်ပေါင်းများစွာ ပါရှိပြီး ရေဖိအားဒါဏ်မခံနိုင်၍တော်ရုံရေကူးသမားများ အောက်ဆုံးထပ်သို့
ကူးခပ်သွားနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရပါတယ် ။
ဒီကား ဒီဇိုင်းလေးကို ဖန်တီးထားသူကတော့ Damnjan Mitic ဖြစ်ပြီး Citroen EGGO လို့နာမည်ပေး ထားပါတယ် ။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ရာသီမရွေး ခရီးသွားလာရာမှာ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ကဏ္ဍ Knowledge, Photo-News